Adobe Lightroom ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 2.1 oo leh warar | Androidsis
Waa hagaag waxay umuuqataa in ugu dambeyn Adobe uu dhigayo baytariyada iyo Waxay noo keeni doontaa cusbooneysiin cusub oo ku saabsan Android mar kasta oo badanaa. Waxyaabaha innaga naga mid ah ee u heellan ama jecel naqshadeynta garaafku ay ku imaan doonaan waxtar, maaddaama aan la macaamileyno shirkadda ugu fiican ee u heellan barnaamijkan noocan oo kale ah oo leh khibrad weyn iyo midka sida xaqiiqda ah macnaha weyn ugu lahaa goobtan naqshadeynta iyo bilicsanaanta muuqaalka oo leh barnaamijyadooda sida Photoshop, Sawir-qaade iyo kuwa kale oo badan.
Hadda cusbooneysiin cusub ayaa soo socota mid ka mid ah barnaamijyada Adobe ee ugu fiican sawir-celinta. Kani waa Adobe Lightroom waxaana loo cusboonaysiiyay nooca 2.1 iyadoo xoogaa horumar ah oo muuqda laga helayo is-dhexgalka iyo kartida ayaa hadda siinaysa adeegsadaha inuu ka nuqul ka sameysto hal sawir si uu ugu dhajiyo mid kale. Sidan oo kale, waxaan ku tafatiri karnaa sawirada si dhakhso leh adigoon istaagin ilbiriqsi si aan ugu celino cabirrada gaarka ah ee aan u maleyno inay ugu fiican yihiin sawirada noocan ah ee aan qaadan laheyn
1 Adobe Lightroom ka xoog badan 2.1
2 Dayactirka cayayaanka iyo isdhexgalka hagaajinta
Adobe Lightroom ka xoog badan 2.1
Hadda shaki kuma jiro in haddii shirkad ama shirkad ay rabto inay joogaan malaayiin qalab adduunka ah, waa inay eegtaa Android sida macruufka oo kale. Waxaan horay u aragnay tan goor dhow oo leh afar barnaamij oo cusub oo ah 'Cloud Cloud' ka Adobe ayaa hadda laga heli karaa Android. Marka xoog iyo adkaysi ayaa ka soo muuqan doona kooxdan muhiimka ah si ay u bilaabaan wararka markasta oo badan. Waxaan rajeyneynaa dhowaan, inay sannado noqon doonto, waxaan dhihi karnaa waxaan haysannaa nuqul aasaasi ah sida midka aan kuheli lahayn noocyada desktop-ka. Laakiin wixii la yidhi, weli wax yar baa hadhay.
Riwaayadaha ugu xiisaha badanMarka laga reebo in badan oo ka mid ah cilladaha cilladaha waa kuwan:
Wax ka beddel sawirada si deg deg ah adoo koobiyeeynaya goobaha sawirka oo ku dhajinaya sawir kale
Sawir si sax ah ugu go 'khibrad dib u naqshadeyn ah oo ku saabsan qalabkaaga Android oo kuu oggolaanaya hagaajin deg deg ah iyo isku toosin
Si fudud u hel sawirada aad ugu jeceshahay. Aragtida cusub ee qaybaha loo ururiyay waxay bixisaa qaab ka duwan oo lagu daawado laguna xusho sawirrada
Taageerada faylka RAW ee kamaradda Panasonic Lumix CM1
Cusboonaysiinta weyn ee cusbooneysiintan ayaa ah koobiyeynta goobaha si ay u awoodaan inay soo saaraan halbeegyada caadiga ah ee mid ka mid ah wax ka beddelkeena sawirrada kale, si markaa kuwaas markaa loo waafajiyo in si sax ah loo saxo Si aad uhesho shaqadan saxaafad dheer oo sawirka ah.
Dayactirka cayayaanka iyo isdhexgalka hagaajinta
Hoos waxaan ku qoraa cayayaanka go'an, wax si gaar ah fiiro gaar ah u leh markii tiro wanaagsan oo iyaga ka mid ahi yimaadaan sida ay ugu dhacdo qaabkan 2.1. Tan macnaheedu waa horumarinta waxqabadka arji Ma ahan wax iftiin ah gebi ahaanba, sidaa darteed kolba sida ay u sarreyso waxqabadkeeda, way sahlanaan doontaa in laga faa'iidaysto.
Sidoo kale a fiiro gaar ah u leh aragtida cusub ee loo qaybiyay taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad si dhakhso leh u hesho dhamaan sawirada aan ku hayno Lightroom. Iyo waxa la yiraahdo haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato barnaamijkan, rukhsad u sameynta Creative Cloud waa lagama maarmaan.
Waxaan idhi, cusbooneysiin cusub oo Lightroom ah oo soo socda muujinta xiisaha iyo dhammaan mustaqbalka weyn ee na sugaya qaabeynta laga soo qaado aaladda Android oo leh Adobe.
Shaashadda ayaa marmar cadaan isu bedeshay kadib markay jihada badashay.
Lightroom ayaa si lama filaan ah u burburi kara markii isticmaaleyaashu ay garaacaan badhanka badhanka.
Go'an arin sababi karta arrimaha markii la dhex wareegayo ururinta badan iyo beddelida jihada qalabka.
Badhanka dhabarka jirka ma uusan xirmin menus macnaha guud.
Waxqabadka liita marka laga beddelayo hal sawir oo loo beddelayo mid kale.
Nuqul ama u guurinta sawir ururinta kale si fiican umay shaqeyn. Tani waxay kaliya ku dhacdaa kiniiniyada Samsung qaarkood.
Lightroom ayaa mararka qaarkood sababa bixitaano aan habooneyn.
Tifatiraha lama arki karo markii sawirada lala wadaagay barnaamijyo iyo adeegyo dhinac saddexaad ah.
Xiritaanka aan habooneyn ayaa dhacay markii mararka qaarkood laga soo raray muuqaalka shabakada loona daawaday aruurinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Adobe Lightroom ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 2.1 oo leh qaabab nuqul ah, hagaajin isku xirnaanta iyo inbadan